IKhabinethi Yethawula Lokugeza
Ikhaya / Blog / Egumbini lokugeza laseJapan, iKhabinethi Yethawula Lizacile Libe Amasentimitha Ayishumi, Isitoreji Sicocekile
2021 / 01 / 16 UkwahlukanisaBlog 6736 0
Isikole Sebhizinisi Langasese 2020-11-15
Indawo yokugezela ayinkulu, ukwenza isitoreji kunengqondo kangakanani lapho kuhlobiswa? Ufuna ukufaka ikhabethe futhi ukhathazeke ngokuhlala endaweni. Kepha kulawo mabhodlela nezimbiza namathawula, ungakubeka kuphi?
Okuhle ukuthi nginomngane owafunda eJapan eminyakeni emibili eyedlule, wangitshela ukuthi leli phuzu lingabhekiswa ngokuphelele ekwakhiweni kwendlu yokugezela yomndeni waseJapan. Faka ikhabethe lethawula elincane elingu-10 cm, izingqimba ezingenhla nezingezansi zesitoreji esinemisebenzi eminingi, ukusebenziseka kunamandla kakhulu!
Kungani izindlu zokugeza zaseJapan zithanda lo mklamo?
▼Ungahlali endaweni elungele izindlu zangasese ezincane
Ikhabethe lethawula elinjalo, ukujula okuphelele kwamasentimitha ayi-10 amancane kuphela. Noma ngabe lokhu kushumekwe odongeni, noma odongeni oluvulekile, ngeke kuthinte imisebenzi ejwayelekile yendawo yokugezela!
▼Isitoreji Esinamandla Sokusebenza Okuningana
Leli khabethe elizacile, ukugcinwa kwamathawula amaningi akuyona inkinga! Izendlalelo zokugcina eziphezulu, eziphakathi neziphansi. Maphakathi nomnyango wekhabethe kusetshenziselwa ukwenza isitoreji esivaliwe, phezulu kusetshenziselwa ukwahlukanisa. Okulandelayo kungasongwa ngqo njengomnyango wekhabethe lekhabethe, okusetshenziselwa ukubeka izingubo zokushintsha. Futhi ngezansi kuyibhola yethawula elijikelezayo, akukho kuvulandi. Amathawula amanzi angomiswa ngqo kuleli khabethe lethawula, lihlakaniphe kanjani!
Kungagcinwa, kungabekwa, kungomiswa, ngubani ongalithandi ikhabethe elinjalo elisebenzayo?
▼Ukoma Nokuhlukaniswa Okumanzi
Lokhu kungenxa yesici sayo sokugcina esigqinsiwe, ikhabethe alibekiwe phansi ngqo. Indawo engezansi yethawula imiswe ngokweqile, ngakho-ke asikho nhlobo isikhala esifile sokugezela. Kwikhabethe lokwehlukanisa elimanzi nelomile, nawe akudingeki ukhathazeke ngomswakama nesikhunta, impilo yenkonzo ende.
Futhi indawo yekhabethe yethawula ingahle ihlelwe ngokunganaki: ibekwe ohlangothini lukasinki. Lapho ugeza, kulula ukuthi uthathe futhi ubeke amathawula. Ingabekwa nasodongeni lwaseceleni eshaweni, ngokushintshwa kwezingubo, ungakhathazeki ngokuba manzi!
Lapho nje ngizwa ukuthi uthini umngani wami, angibange ngisalinda ukucela inkosi ukuba iye ekhaya ngiyifake kabusha. Gcina isikhala, isitoreji esiqinile. Lokhu kuyifanele ngokuphelele indlu yami encane yokugezela engamamitha-skwele ama-3, akumangazi ukuthi wonke umuntu uncome isitoreji sokuhlobisa saseJapan. Kepha kunezindawo eziningi kakhulu ongazifunda, futhi ekugcineni umngani wami uphinde wabelana ngemidwebo emi-2 yokugezela yaseJapan, nginqume nokwenza kabusha ikhaya lami ngokufanele ↓
Imininingwane Yokuqala: Faka Ibha Yokubamba Ehlangothini Lethoyilethi
Ngakho-ke lapho uvuka ekuhlaleni ethoyilethi isikhathi eside, ungaba nendawo yokusiza. Ikakhulukazi asebekhulile abanenkinga yokuhamba. Lapho uhlangothi lwendlu yangasese lune-handrail, luphephe kakhulu futhi lunobuntu!
Imininingwane Yesibili: Nweba Isinki Ehlangothini Lethoyilethi
Khulisa indawo eshalofini, bese welula isikhala ukukhulisa umuzwa jikelele wegumbi, osetshenziselwa ukubeka amathawula wephepha, omakhalekhukhwini. Lokhu ngeke kufaneleke ngokwengeziwe.
Imininingwane 3: Faka i-Crossbar Enezingwegwe Ohlangothini Lwesinki
Umuthi wokuxubha neminye imikhiqizo yokuhlanza izobekwa eceleni. Ukwehlukaniswa okumanzi nokomile, kunciphisa ukuzalaniswa kwamagciwane, kepha futhi nokukhulula isikhala sebhasi yokuwasha!
Edlule :: Noma Igumbi Lokugezela Lingaphansi Kwamamitha ayisikwele ayi-5, Isigaxa Esimanzi Futhi Esomile Akunzima Ukungihlula! Olandelayo: Ukubuyekezwa Kwetheyiphu Yekhishi LaseDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Ka-2021 Wompompi Bekhishi BaseDelta
2021 / 01 / 15 5809